व्यापारिक एकता सहितको अधिकार स्थापित गरी आर्थिक समृद्धिको मुहार फेर्नका लागि मेरो उम्मेद्वारी हो ः केसी « Thahaonline.com | थाहा अनलाइन
व्यापारिक एकता सहितको अधिकार स्थापित गरी आर्थिक समृद्धिको मुहार फेर्नका लागि मेरो उम्मेद्वारी हो ः केसी
२९ भाद्र २०७४, बिहीबार १९:१५ मा प्रकाशित
‘सुक्दै गरेको नारायणपुर क्षेत्रको व्यापारको विकास , सुरक्षा , स्थानिय उत्पादनको बजारीकरण साथै फोहोर व्यावस्थापनका लागि मेरो उम्मेद्वारी हो । व्यापारीक र व्यापारमैत्री सुरक्षाको विकास मेरो पहिलो प्रयास हो । नारायणपुर उद्योग वाणिज्य संघको लोकतान्त्रिक प्यानलका उम्मेद्वार द्रोण वहादुर केसी संग गिरिराज नेपालीले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप – सम्पादक
प्रचारमा हिड्नु नै भएको छ होला ?
व्यावसाय र व्यावसायीहरुको हक अधिकार र दायित्व वोधका लागि नयाँ सोचका साथ नारायणपुर उद्योग वाणिज्य संघको नयाँ नेतृत्वका लागि चुनावी मैदानमा उत्रिएको छु । आफ्ना एजेण्डा बोकेर चुनावी घरदैलोमा व्यस्त छौ ।
व्यावसायीहरुको कस्तो प्रतिक्रिया छ नि ?
ठिकै छ । व्यावसायीक हकहित सहितका योजनाहरु थुप्रै लिएका छौ । ‘उज्यालो र समृद्ध नारायणपुर’ वनाउने सपना वोकेका छौ ।
त्यो सपना हामी उम्मेद्वारहरुको मात्रै नभई नारायाणपुर वासी सवैको हो । हामी व्यापारी , नागरिक , सरकारी तथा गैर सरकारी सवै संघसंस्थाहरुको एकताको प्रयास वोकेको छौ । जसका कारण लोकतान्त्रिक प्यानल लाई जिताउनु हुन्छ भन्ने सोचेको छौ । त्यो असम्भव पनि छ ।
जित्छौ तँ भन्नुभयो । तर जित्ने आधार के छ नि ?
आधारहरु पनि प्रशस्तै छन हाम्रा । यस अघिको संघको नेतृत्व जिम्मेवारी रही व्यावसायीक हकहितका सवालमा काम गरेर व्यावसायीहरु मनोभावना र समस्या समाधानका लागि थुप्रै काम गरेर संघ लाई केही सहजीकरण गरेको छु । अव भन्ने पर्ने के छ ।
भने जव त्रिपुर घोराही उप–महानगरमा गाभियो । तव देखी नारायणपुरको विकास सुस्ताउदै गतिमा छ । त्यो सस्ताउदो गति लाई निरन्तरता दिदै नारायणपुर लाई नमुनायोग्य शहर , उद्योग मुखी रहर लाग्दो शहरका रुपमा विकास गर्ने आधार र प्रतिवद्धताहरु रहेकाले केही ति प्रतिवद्धता र केही व्यावसायीक योजना रहेकाले यि आधारहरु बटुल्दै व्यावसायी नेतृत्वको जिम्मेवारी वोक्ने छु ।
साथै फोहोर दुर्गन्धले आक्रान्त बजार वासी लाई सफा र सुन्दर शहर दिने अभिप्रायले संघको नेतृत्व वोक्न खोजेको छु । यि कार्य प्रतिवद्धता सहितका आधारित योजना रहेका छन ।
व्यावसायिक एजेण्डा कस्ता छन ?
चुनावी प्रचारमा हामीले जोडतोडका रुपमा व्यावसायिक कर निति लाई व्यावसायी मुखी वनाउने योजना सहितका विविध व्यावसायीक एजेण्डा निर्माण गरेका छौ ।
नारायणपुर लाई कृर्षि उत्पादनको प्रशोधनको थलोको रुपमा विकास गरी स्थानिय उत्पादन निजि क्षेत्र वाट प्रर्वद्धन गर्ने , अण्डर विलिङ सिस्टम लाई अन्त्य गरी सुरक्षित व्यापार संरक्षित व्यापारी भन्ने योजनाका साथै नारायणपुर लाई दक्षिणमा देउखुरीको रिहारमा उत्तरमा रोल्पाको होलेरी संगको व्यापारिक तथा व्यापारीक पारवहनको खुल्ला गरी यहाँको स्थानिय व्यापार लाई केन्द्रीत केन््रदीकृत व्यापारका रुपमा विकास गरी नारायणपुर क्षेत्रको आर्थिक स्तर लाई समृद्ध र मजवुत वनाउने लक्ष्य रहेको छ ।
साथै नारायणपुृर लाई अन्र्तराष्ट्रि विमान स्थलको सम्भाव्यता क्षेत्रका रुपमा घोषणा गरे । त्यस लाई सार्थक वनाउन संघको एजेण्डा वनेको छ । व्यावसायिक हक अधिकार , सुरक्षा र व्यावसाययक विकास छदैछ । त्यो हुने कुरा नै हो ।
अन्त्यमा केही कुरा राख्न चाहान्नु हुन्छ ?
अन्त्यमा संघको एजेण्डा वारेमा कुरा राख्न अवसर दिनुभयो । तपाई र सैघाली खबर परिवार लाई धन्यावाद । मतदाता व्यापारी साथीहरु लाई के भन्नु हुन्छ । भने योग्य , असल काम गर्न सक्ने उम्मेद्वार लाई चिन्नुहोस । संघ , व्यावसाय र नारायणपुर क्षेत्रको विकास गर्ने सक्ने उम्मेद्वार लाई हेरी मतदान गर्नुहोला । धन्यावाद